Idi N'ogbe 480L Automatic Laboratory Glassware Washer na-emepụta na ndị na-ebubata |Xipingzhe
Rising-F1 Laboratory glassware washer, Ime ọnụ ụzọ abụọ, enwere ike ijikọ ya na mmiri mgbata & mmiri dị ọcha.Usoro ọkọlọtọ bụ iji mmiri mgbata & detergent na-eme tumadi ịsacha, wee jiri nchacha mmiri dị ọcha, ọ ga-ewetara gị mmetụta nhicha dị mma na ngwa ngwa.Mgbe ị nwere chọrọ nkụ maka arịa ehichachara, biko họrọ Rising-F1.
Iji hichaa na nkụ laabu arịa nke iko, seramiiki, metal, roba na plastic ihe, dị ka petri efere, slide, chromatographic flask, nha karama, sampler vial, conical flask, pipette, ule tube, beaker wdg, na glassware na ibu size.
1.316 igwe anaghị agba nchara na 316L igwe anaghị agba nchara n'ime liner
2.Glassware loading: kwụ ọtọ site na ụlọ (ebe dị ọcha na adịghị ọcha)
3. Nbudata nkata: ọkwa 5
5. Usoro nhicha: 88 mmemme
6.Ugboro abụọ na-ekesa mgbapụta mgbapụta: 1100L / min
7.Double peristaltic detergent na acid mgbapụta, igbapu mgbapụta
8.HEPA nzacha ihicha usoro, mmezi na 1ºCincrements, kpo oku ike 8KW
9. Akụkụ dị n'èzí: H/W/D(mm)2340*1250*1050
Aha ika: XPZ Nọmba nlereanya: Na-ebili-F1
Ebe amụrụ: Hangzhou, China Oriri Ike N'ozuzu: 40KW
Ọnụ ụlọ ịsa ahụ: 480L Ihe: Ime ụlọ 316L / Shell 304
Oriri mmiri / okirikiri: 45L Oriri ike-ọkụ mmiri: 27KW
Nha Ụlọ nzacha(H*W*D)mm: 1067*657*800mm Nha mpụga(H*W*D)mm: 2000*1250*1105mm
Nnukwu ibu (kg): 730kg
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa Ngwugwu osisi
Igwe ihe ncha akpa akpaaka
4. Nhicha, disinfection, ihicha na imecha akpaaka, ibelata ngwá ọrụ na ntinye ọrụ, na-echekwa ego
——- Usoro ịsa ahụ nkịtị
Tupu ịsacha → ịsacha na alkaline detergent n'okpuru 80 ° C → kpochaa na acid acid → kpochapu mmiri mmiri → kpochapu mmiri dị ọcha → kpochaa mmiri dị ọcha n'okpuru 75 ° C → ihicha
ihicha nke ọma
1.In situ ihicha usoro
2. Ihe nzacha arụmọrụ HEPA wuru n'ime ya iji hụ na ịdị ọcha nke ikuku akọrọ;
3. Mekọrịta pipeline mgbasa ozi ihicha iji zere mmetọ pipeline nke usoro nhicha;
4. Njikwa okpomọkụ okpukpu abụọ iji hụ na ihicha okpomọkụ;
Nlereanya Na-ebili-F1 Nlereanya Na-ebili-F1
Ịnye ọkụ 380V Usoro ụzọ abụọ akpaaka Ee
Mkpokọta ike 38KW Pump peristaltic ≥2
Ike ikpo ọkụ 27KW Ngalaba condensing Ee
Ike ịkpọ nkụ ≥1KW Mmemme omenala Ee
Ọkụ ịsa ahụ. 50-93ºC 7 inch ihuenyo Ee
Ọnụ ụlọ ịsa ahụ ≥480L Igwe nbipute RS232 Ee
Usoro nhicha ≥35 Ihe nbipute arụnyere n'ime ya Nhọrọ
The Layer Number nke ihicha 5 n'ígwé Nleba anya omume Nhọrọ
Ọnụego ịsacha mgbapụta ≥1300L/min Ịntanetị nke ihe Nhọrọ
Ibu 730KG Akụkụ (H*W*D)mm 2000*1250*1105mm
Ogo oghere ime (H*W*D)mm 1067*657*800mm
Nke gara aga: Ụlọ nyocha Washer Disinfector Akpaaka Glassware Washer
Laboratory Pipette Washer na ihicha